FAQs - Jade Technology Co., Ltd
FAQs nokuti Company
Sei nechokwadi risanyatsobuda yenyu?
We makasimbisa akakwana wedzerai cheni chinosanganisira zvachose filtrated wakanakisisa vapemhi uye mumwe chigadzirwa vachaedzwa asati kusiya fekitari yedu.
Une zvitupa iyo kunodikanwa pamusika yedu?
Hongu, vose zvinhu zvedu tiri ETL / CETL / CE / ROHS / CEC certificated. Tinogona kushandisa nokuda gwaro rinokosha kuti chinodiwa musika wako.
Unoziva anopa ivhu? zviri pachena kana kuti kwete?
Mimwe dziripo kwamuri, asi unofanira kuripirwa. Tinotenda kuti kunzwisisa kwenyu mutsa.
Sei pamusoro mashoko muripo?
T / T chinonyanya varumbidzwa, Paypal / Western Union / LC uye mamwe mashoko muripo zvinhu zvinogamuchirika
Unogona kuita OEM kwatiri?
Hongu, isu kupa pamwe OEM, ODM, OBM kunosangana siyana zvinodiwa renyu.
Sei garandi yako?
We zvinopa 12 mwedzi garandi kubva zvinhu kusiya fekitari yedu. Nesuwo kupa pamwe kwenguva refu yokutengesa uye pashure-sale rutsigiro, nyanzvi injiniya kuchabatsira kuti varumbidze zvikuru yakakodzera zvinhu pashure pokudzidza zvinodiwa zvenyu vatengi ', uye gadzirisa mhinduro chero anokosha mafomu dzenyu
FAQs nokuti Products
Sei yangu pombi mabasa noruzha rukuru uye injini dzapisa chaizvo?
Kazhinji anokonzerwa nechisimba chokufambisa, nomubato bents uye rotor rubs pamwe stator kana injini iri kumhanya. Tapota bvunza kana pasuru ari mumamiriro ezvinhu akanaka kana pombi rinosvika iwe.
Sei pombi yangu kuvacheri vemvura shoma?
Kana pombi kunoitawo chinoshamisa ruzha apo kashoma kuvacheri vemvura, tapota nekukatanura pombi uye kuongorora kana impeller iri aina Mabwe nezvishoma. Izvi zvingaitika munguva akavaka mumadziva matsva kana iwe kuisa pombi pasina wakachena matombo maduku. Kana pasina wokumwe ruzha, ndapota tarisa kana iwe ndakagadza zvakanaka, izvi zvingaitika kana midziyo yenyu Vacuum rotsva.
My pombi injini kupiswa, sei kuti zviitike?
Tapota bvunza kana zvakaipa wired that kuti voltage ari hunyambiri voltage pombi.